तोकेका बाहेक पसल मनलाग्दी खुले :नियम नमाने फेरि लकडाउन, सचेत हुन आग्रह ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/तोकेका बाहेक पसल मनलाग्दी खुले :नियम नमाने फेरि लकडाउन, सचेत हुन आग्रह !
हामीले सरकारको आदेशको स्वागत गरेका छौ सरकारको नियम, निती विपरित काम नगरेको दावी गर्नुहुन्छ । आदेश विपरीत व्यवसाय खोल्नेलाई सरकारले अनुगमन गरेर का’रवा’ही गर्न व्यसायी कटुवाल बताउनुहुन्छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रो’ग अस्पताल, टेकुका डा. शेरबहादुर पुन जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ । को’रोनालाई सामान्य रुपमा नलिन समेत उहाँको आग्रह छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।